Njengoba wazi, ngaphambi kokuba uhlobise umzimba wakho ngalokhu noma lo tattoo, kufanele wazi kuqala incazelo yalo. Okwamanje, ukuthandwa kwamathambo amanga kuyaqhubeka. Namuhla sizokhuluma ngama-griffins.
Izidalwa eziningi zezinkolelo ziyi-symbiosis yezilwane eziningana. Ama-Griffins ahlukile. Ukuba khona okuyisimanga kunenhloko yokhozi nomzimba wengonyama. Imfanelo yokugunyazwa ye-griffin yimiaphiko, efanekisela ukubusa phezu kwesibhakabhaka nomhlaba.
Ukukhulunywa kwama-griffins kwavela emakhulwini e-5th-6th BC. Khona-ke bema abalindi phezu kwegolide laseNdiya futhi baqinisekiswe ngabalindi belanga, ubulungisa nomuthi wokuphila. AmaGreki asendulo ayekholelwa ukuthi ama-griffins ayizidalwa ezixwayisa ngengozi futhi abonisa ukuqapha nokuqonda.
Noma yiziphi izinkomba zomlando nezincazelo kuncishiswa ukuba nombono ofanayo wokuthi ama-griffins awakhuleka futhi awakhulekela. Lezi zidalwa zazibhekwa njengezinamandla kunezilwane ezivamile, zenza iminikelo, izithombe zegolide zakhiwa. Ema-Middle Ages ama-griffins ayevame "izivakashi" ezigabhanini nezingubo zezingalo. I-symbiosis yesilwane esinamandla kanye nesibindi esibukhali besibani, isibindi, isibindi nesibindi.
Tattoo we-Warrior Weqiniso
Amagugu ukuthi i-"Griffins" enezidakamizwa zinamandla kakhulu. Njengoba inkosi ithi, esimweni esithile, umuntu ngamunye uzikhethela kahle leyo mbono nencazelo eseduze emoyeni, ukholo nenhliziyo.
Uma uhamba ngezinkolelo zamaGreki zasendulo, khona-ke ukubaluleka kwe tattoo "Griffins" kuzoba okuhlukile. Ngokomlando, unkulunkulukazi u-Athena, lezi zidalwa zazifanekisela ukuhlakanipha nemisebenzi efihlekile, ngoba uNemesis - ubulungisa nokubuyisela. AmaGriffins aqaphe uZeyus futhi asiza empini ye-Apollo.
Ngokuvamile abantu bezobuchwepheshe bezempi benza i-tattoo "Griffin". Inani lezithombe kulokhu lizokwehliselwa emagameni amabili "alindile" futhi "usebenze." I-tattoo enjalo ayikwazi ukufanekisela kangcono impi yangempela. Uzotshela abanye ukuthi umnikazi wakhe unesibindi futhi unesibindi, njengengonyama yangempela, futhi unamehlo aqotho, njengokhozi olusenyakatho.
Ososayensi abaningi bathi ama-griffins nawo ayewuphawu lokuhlakanipha namandla amakhulu engqondo. Kulokhu, abathengisi, abasebenzi bezesayensi nobuciko bangase banakekele ne-tattoo "Griffins".
Ezingqungqutheleni zamaSlavic izidalwa zenyama zazimi ekuvikeleni okuhle, zivikela ebubini. I-tattoo "Griffins" nayo isho ukuthi "ukunqoba kwabaphilayo ngaphezu kwabafileyo". Abaningi babeka izithombe zabo emizimbeni yabo ukuze basebenzise umdwebo njengesivikelo sokuzivikela. Ngokomlando, ama-griffins azinikezwa izidalwa, evikela njalo inkosi yabo, umngane, umngane wabo empini.
Uma ukhetha i-tattoo, akufanele unqume ubukhulu bayo kuphela, kodwa futhi nendawo yokusebenza. Uma ukukhetha kwakho kwehla kwi-tattoo "Griffin", izithombe ze-sampuli ziyoba usizo oluhle. Njengomthetho, imidwebo enjalo ilula futhi isetshenziselwa isiphambili, emuva, esifubeni. Kungaba mnyama futhi kumhlophe noma kunemibala ekhanyayo ebomvu, ephuzi negolide. Yiloluhlelo lombala olukwazi ukudlulisela amandla amanga, isibindi samaqhawe kanye nengqondo enhle yama-griffins.
Kuyini ukususwa kwezinwele ze-enzyme: incazelo, ukubuyekezwa
Lasekuqaleni orange bhisikidi
Umdlalo wokugcina we-XIII - ukudlula
Peso Mexican. Umlando kanye nokwaziswa okuwusizo mayelana lwemali Mexican
Mapco: Izibuyekezo izingxenye ezisele "Mapco", ezweni lendabuko. Izihlungi "Mapco": Izibuyekezo
3D izinwele-Umbala - umkhuba 2015
Zama iphupho nencazo: ukubona utamatisi elibomvu - nanti iphuzu?